ICC investigating approach during Windies, Zimbabwe series – HTS News 4orce
Home / Sports / ICC investigating approach during Windies, Zimbabwe series
November 16, 2017	Sports, Top Stories Leave a comment
LONDON, England (CMC) – Cricket’s world governing body, the International Cricket Council (ICC), is investigating an approach made to Zimbabwe Captain Graeme Cremer to fix parts of the recent two-Test series against West Indies.
Media reports yesterday said that Cremer had rejected the approach, allegedly from a former Zimbabwe Cricket board member, prior to the first Test on October 21, and reported the incident to Head Coach Heath Streak.
The matter was referred to Zimbabwe Cricket and then to the ICC who has since confirmed that its Anti-Corruption Unit (ACU) was investigating.
“The ICC, can confirm that there is an ACU ongoing investigation in Zimbabwe, and because there is an ongoing investigation, I cannot share any further details,” an ICC spokesperson was quoted as saying.
Zimbabwe, however, hung on for a draw in the second Test at the same venue leaving the Caribbean side with a 1-0 series win.
Next Cariah reprimanded for breaching Code of Conduct